Nzira yekuita sei inoshingaira mukushambadzira nyanzvi?
Nyika yemazuva ano yemazuva ano yakave yakawanda kupfuura yekare, sezvinowanzofungidzirwa zvakawandisa kupfuura zvese zvichitiudza kuti hafu yevanhu vepasi pose vamiriri vashandisi, kushandura paIndaneti zuva rega rega. Iyezvino vanopfuura mabhiriyoni matatu vanoshandisa paIndaneti vari kutyaira mhizha yekutengeserana kwekudhijita kwehutori hukuru pane hupenyu hwedu hwechokwadi. Somugumisiro, zvikamu zvakadai zvebhidhiyo sebasa rekutsvaga rekutsvaga muIndaneti, mutungamiri wekutengesa, tsvakurudzo yeIndaneti, CRM, kana nyanzvi yekugadzira michina iri kunyanya kudiwa nehuwandu huwandu hwekambani dzakabatana nemhizha.
Tisati tatanga, ngationei zvakare. Apo patinoti muInternet muchengeti wekutengeserana, kazhinji tinenge tichitaura nezvechikwata kana kuti kukurudzirwa kwechigadzirwa padijidhi re media. Iyi minda yekare yekutengeserana inobatanidza nekushambadzira kwepaIndaneti pamakambani e digital kubva kune webhusaiti inonyanya nzira dze email nehupfumi. Imwe nyanzvi yemazuva ano yekutengeserana inoshandiswa pakuvaka simba rakasimba rezita rechigorosi, kusimbisa kuzivikanwa kwepaIndaneti kune vakawanda vanogona kutenga vatengi kuti vashandise kutendeukira kune vatengi chaivo mushure mezvose. Vatungamiri vatungamiri pano vatove vachishandiswa kuisa mari mumakambani akasiyana-siyana ekutsvaga kutengesa sehurukuro yekutsvaga deta, kugadzirwa kwehupenyu nekudaro. Uye chinangwa chikuru cheshamwari dzose dzekutengesa muInternet ndeyekutyaira vanhu vakawanda kutengesa kuburikidza nehupenyu kana hwebhadharo yekutsvaga kutsvaga motokari.
Saka, nei kutengeserana kwemadijita kwakave kwakakurumbira munyika yose? Uye, saka, nei kuwanikwa kwekutsvaga muIndaneti kuri kudai ikozvino kubhadhara? Chokutanga, kutengeserana kwemazuva ano kunogona kuwana nyore kutora zvakarurama, kazhinji kunokwanisa kupa zvitsva zvakakurumidza. Iyo inodhura uye inonyatsoshanda zvakanyanya kupikisana neyopakutanga. Kunyange zvikomborero sezvataurwa pamusoro apa zvinogutsa zvakakwana, ndinofanira kubvuma. Saka ndeipi hunyanzvi hunobudirira hunove hwakanaka iye zvino kuburikidza nehuwandu hwemakambani ekutsvaga kutengesa nzira inoenda kune unyanzvi kubudirira?
Ngatiedze kuumba kuti unyanzvi hupi hunodiwa kuti uve mumiririri akakodzera wemunda. Chinhu ichi ndechekuti pane mazana emarudzi akawanda emhando dzakasiyana dzakapiwa paInternet. Saka, zvakaoma kuita mutsauko wakarurama uye kupa chero rupiro rwakarurama rwezano. Kunyange zvakadaro, izvo zvandinogona kutaura ndezvekuti iyo yose inyanzvi yekutsvaga muInternet inofanira kunge iine ruzivo rwakadzika muwebhu web analytics, unofunga nezvemashoko ekutanga ekudhinda kwema digital, kunzwisisa pfungwa dzepfungwa dzekudzidza kwepakutanga, pamwe nekuziva iyo minda yakawanda uye zvikamu zvakasimba zvemazuva ano kutengesa digital.
Asi sei ungawana nzira yakakodzera yekuve yakakosha yekutsvaga nyanzvi? Ndinotenda kuti dzidzo dzakadaro dzinofanira kuva dzakakwana uye dzakakwana, iva nechokwadi chokuti dzinofukidza zvinhu zvinotevera paunenge uchisarudza zvakanaka:
nheyo dzepfungwa (Tsvaga Engine uye Kuchinja Mutengo Kugadzirwa, Social Media uye Zvokutsvaga Zvokutengesa, Web Analytics, Mazano eIndaneti uye Mobile Marketing, Kubhadhara Kutsvaga Marketing, etc. )
zvishandiso zvikuru uye zvigadziriswe (Pay per Click Ads, AdWords, Google Analytics, YouTube, Facebook, Twitter, etc Source .)